lay lay nge says:
Kay Khine Win says:
mu yar says:
အစ်မရေ ကျတော်လုပ်စားချင်တယ် ဒါပေမဲ့ ကျတော်တို့ဆီမှာ ဖလာမှုန့်ဆိုတာမရှိဘူးအစ်မ အဲဒါမထည့်ရင်ရော အခြားဘာကိုထဲလိုရမလဲ နောက်ပြီး ဆန်မှုန့်ဆိုတာက ဘာလိုလုပ်ရလဲမသိဘူး ရှင်းပြပေးပါလားအစ်မရယ် မစားရတာ2နှစ်ကျော်လောက်ရှိတော့ စားချင်လွန်းလို့ပါ အစ်မရယ် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
ဖလာမှုန့်က အနံ့အတွက် ထည့်တာ။ သူမထည့်လည်း ကူဖီလုပ်လို့ရပါတယ်။ နို့တည်ထားတာ ပူလာမှ ဆန်မှုန့်က ထည့်ထားရမှာပါ… လုပ်စားကြည့်ပါနော်.. 🙂
yoe lay says:
မ၀တ်ရည်ကျေးဇူးကြောင့် ကူဖီးလုပ်တတ်သွားတယ် .. စားလို့အရမ်းကောင်းပါတယ်.. ခုဆို နေ့တိုင်းနီးပါးလုပ်စားဖြစ်နေလို့ဝိတ်တက်လာမှာတောင် စိုးရတယ် 😛
၂ ကြိမ် ရှိပြီလုပ်စားတာ အရမ်းကြိုက်တယ်
haa Me too.. I like it very much 😛
Thank you so much how to make Kulfi.
Our family will make it at weekends.
I think it will delicious.You can reply me.Thank you so much ma Wutyee.
Ok Plz reply me! Thanks
Thank you for u r cooking. Now i am still attending at school.And then i have holiday or weekends i usually cook u r meals and snack together with my family.
sis.. where can I get ဖလာမှုန့် ?
ဖာလာမှုန့် ၀ယ်မရရင်။ ဖာလာကို အခွံဖယ်ပြီ အစေ့ကို ထောင်းပြီ သုံးလည်းရပါတယ်
Aye Yu Maw says:
မမရေ မိုးကျတော့ မှဒီမုန့် ကိုတွေ့ တယ်
ကျေးဖူးနော်မမ မုန့် လုပ်နည်းတွေရှာရင်းနဲ့ တွေ့ တာ
Plz try it sis 🙂
မ၀တ်ရည်ရေ မုန့် ကမခဲဘူး။အစ်မလိုမဖြစ်ဘူး။ဘာလိုနေလဲမသိဘူး။
အရသာကတော်တော်ကောင်းတယ်။အစ်မပုံထဲကလိုမဖြစ်ဘူး။ပျော့ စိစိနဲ့ ။
ရေခဲသေတ္တာအပေါ်ဆုံးထပ်မှာ ၂နာရီလောက် ထည့်ထားရင် ခဲပါတယ်..
mya kay khaing says:
တစ်ခါမှလုပ်မစားဖူးသေးဘူး အစ်မဝတ်ရည်ရေ။ငယ်ငယ်ထဲက အရမ်းကိုကြိုက်ခဲ့တာ..
အခုတော့ ကိုယ့်ဟာကိုယ်လုပ်စားတော့မယ်..အမရဲ့ လက်ရာလေးတွေကို အရမ်း အားကျမိပါတယ်…
သားသမီးတွေ အတွက်လည်း စေတနာထားပြီးလုပ်ပေးနိုင်တဲ့ အစ်မလက်ရာလေးတွေကို အကုန်မှတ်ထားပါတယ်..သမီးလေးနှစ်ယောက်ကြီးလာရင် ဖတ်ခိုင်းဖို့ပါ…
ပြီးပြည့်စုံတဲ့ မိသားစုဘ၀လေးကို အစဥိအမြဲ ပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေလို့ ဆန္ဒပြုလိုက်ပါတယ်ရှင်….
Thanks also par sis yay 🙂
ဟုတ်ကဲ့ ၀တ်ရည်ကလည်း ကျေးဇူး
Very glad to hear, you like it! 🙂
[…] ကူဖီ မလိုင် (Kulfi) […]
မ၀တ်ရည်ရေ..လုပ်စားကြည့်ပြီးပါပြီ။အရသာကကောင်းပါတယ်။ ဖာလာအနံ့တော့နည်းနည်းလေးပြင်းတယ်။ ရန်ကုန်မှာရောင်းတဲ့ နို့ဆီနဲ့လုပ်တဲ့ ကူဖီမလိုင်မျိုး (သို့) ရွှေပုစွန်က ကူဖီမလိုင်လုပ်နည်းမျိုးသိရင်ပြောပြပေးပါလား။
ဟုတ်ကဲ့ ကြိုးစားပြီ တင်ပေးပါ့မယ်
လုပ်စားလိုက်တယ် ကောင်းလိုက်တာဗျ ငိုလည်းငိုချင်တယ် အရင်ကသာသိခဲ့ရင် ကျွန်တော့်အဖေကို လုပ်ကျွေးလိုက်ပါတယ် သူအရမ်းကြိုက်တာဗျ ကျေးဇူးပါနော်
ဟုတ်။ မိဘကို လုပ်ကျွေးချင်စိတ်စေတနာကို လေးစားမိပါတယ် bro 🙂
thanks so much ma wutyee i just knew your website!!very useful one..
by the way i want to know what is “FILAR MONT” in this kufee post
ဖာလာမှုန့် = ဖာလာမှုန့်အစား ဖာလာစေ့များကို ထောင်းထည့်လျှင်လည်း ရပါတယ်။ ဖာလာစေ့က အိန္ဒိယ ဟင်းခတ်အမွှေးအကြိုင် တမျိုးပါ။ City Mart မှာ အိန္ဒိယ ဟင်းခတ် အမွှေးအကြိုင်တန်းမှာ ၀ယ်လို့ရပါတယ်
Wutyee Food House » သက်သက်လွတ် ချက်ပြုတ်နည်းများ says:
MyanmarEating.com Blog » Blog Archive » ကူဖီ မလိုင် (Kulfi) says:
[…] Credit & Thanks : http://www.wutyeefoodhouse.com […]
toe toe wai says:
Dear sister wutyee, i would like to know the recipes of soft ice-cream and hard ice-cream. I request to give me if you have these recipes. Thank you so much.
I will try to post later 😀
Chit Phue says:
သီဟိုစေ့တို့ ဗန်ဒါစေ့ တို့ မထည့်ရင် ကူဖီးလ်မလိုင် ဖြစ်ပ့မလားဟင်… အဲ့ဒါတွေ မကြိုက်လို့…
မ၀တ်ရည်ရေ… အော်ဇီမှာ ဆန်မှုန့် ရှာမတွေ့တာနဲ့… ညီမလေ… ကိတ်မုန့်ဖုတ်တဲ့ ဂျုံမှုန့်တွေ ထည့်ပြီး လုပ်လိုက်ပီ အခု… ဘယ်လိုရလာမလဲတော့ မသိသေးဘူး…. မစားရတာလည်း ကြာတာနဲ့ ဖြစ်ချင်ရာ ဖြစ် လုပ်လိုက်ပီ အစ်မရေ…
ကောင်းမှာပါ sis.. 😀
ဟုတ် ဖြစ်ပါတယ်။ ကူဖီမှာ တချို့လည်း မထည့်ပါဘူး.. လုပ်စားကြည့်ပါနော်..
ဖြစ်တော့ ဖြစ်သွားတယ် မ၀တ်ရည်ရေ… ဒါပေမယ့် ဂျုံမှုန့် အလုံးလေးတွေတော့ စားတဲ့အထဲမှာ ပါလာတယ်… ဒါပေမယ့် ကောင်းပါတယ်… ကျေးဇူးပါ…
ဂျုံမှုန့်တွေ မကျေရင် ဇကာနဲ့ စစ်ပြီ ခြေပြီ ထည့်ရင် အဆင်ပြေမယ် sis…
ပုံထဲက ပြထားတဲ.အတိုင်း ရေခဲသတ္တာထဲက ထုတ်ထားတာ..
အဲလို ပျော်ပြီး ပျော့ မနေဘူး..
နို့ နည်း လို့လား.. ဆန်မှုန့်များသွားလို့လား..
saw khine says:
power point နဲ. သေသေချာချာ လုပ်ပေးထားရင်ကောင်းမှာဘဲ။ ။
Is the rice powder raw or fried? I mean “a seinn lar, hlaw lar”. Can I use Ready made San Hlaw?
When having different painting provide contractors who can help.
The business information on the company’s breakeven that matters.
Decide on the job. That’s when you show your home improvement experience for your special status.
Where customers comes to remodeling services to the bare minimum, and
making the consumers realize what is right for customer’s home.
Since you havealight color over longer distances.
Though some investment is worthwhile to ask through the project.
Thank You Ma Wut Yee